Ny Turkménistan Airlines dia mitana ny laharana voalohany amin'ny Airbus
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Turkménistan Airlines dia mitana ny laharana voalohany amin'ny Airbus
Turkmenistan Airlines dia lasa mpanjifa Airbus vaovao miaraka amina lamina fiaramanidina A330-200 roa
Turkmenistan Airlines dia nametraka baiko ho an'ny fiaramanidina A330-200 Passenger-to-Freighter (P2F) roa niova fo, lasa mpanjifa Airbus vaovao. Ity kaomandy ity dia manamarika ny fotoana voalohany amidy ny fiaramanidina Airbus any Turkménistan. Ny A330-200P2F dia ahafahan'ny zotram-piaramanidina hampivelatra bebe kokoa sy hampiroborobo ny tamba-jotra amin'ny zotra iraisam-pirenena. Ny fandefasana ny fiaramanidina dia kasaina amin'ny 2022, ka ny Turkmenistan Airlines no mpandraharaha voalohany amin'ity karazana ity any Azia Afovoany.
Ny programa A330 mpandeha ho an'ny fanodinana entana dia natomboka tamin'ny taona 2012 ka nahatonga ny fandefasana indray ny prototype A330P2F tamin'ny faran'ny taona 2017. Ny programa A330P2F dia fiaraha-miasa eo amin'ny ST Engineering Aerospace, Airbus sy ny fiaraha-miombon'antoka Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW). Ny ST Engineering dia nanana ny fandaharana sy ny fitarihana teknika ho an'ny dingana fampandrosoana ny injeniera, raha ny EFW kosa no tompony sy tompon'ny mari-pankasitrahana fanampiny (STC) ho an'ny programa fiovam-po Airbus misy an'i A330P2F ary mitarika ny sehatry ny indostria sy ny marketing ho an'ireo programa ireo. Airbus dia mandray anjara amin'ny programa miaraka amin'ny angona mpanamboatra sy ny fanamarinana fanamarinana.
Ny programa A330P2F dia misy karazany roa - ny A330-200P2F sy A330-300P2F. Ny A330-200P2F dia vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpitatitra entana avo lenta sy fampisehoana lavitra kokoa. Ny fiaramanidina dia afaka mitondra lanjan'ny 61 taonina hatramin'ny 7700 km mahery, manome habetsahan'ny entana bebe kokoa sy vidiny ambany isan-taonina noho ny karazana sidina mpitatitra entana hafa misy karazany mitovy amin'izany. Ankoatr'izay, ny fiaramanidina dia mampiditra haitao mandroso, ao anatin'izany ny fanaraha-maso manidina, manome tolotra ho an'ny zotram-piaramanidina tombony fanampiny amin'ny asa sy toekarena
Ny zotram-piaramanidina Lufthansa Group dia manitsy ny takian'ny sarontava
FlyersRights nidera ny baiko mpanatanteraka fiaramanidina Biden's mask